72 jir dhirirkiisu yahay 54 cm oo noqday qofka ugu gaaban Aduunka+SAWIRO – SBC
72 jir dhirirkiisu yahay 54 cm oo noqday qofka ugu gaaban Aduunka+SAWIRO
Posted by editor on February 29, 2012 Comments
72 sano jir u dhashay wadanka Nepal ee qaarada Aasiya ayaa loo aqoonsadey ninka aduunka ugu gaaban sadex todobaad ka dib markii uu saxaafada caalamka soo jiitey, isla markaana uu dadaal u galey sidii uu ku hanan lahaa darajadan.
Ma ahan oo kaliya in uu yahay ninka aduunka ugu gaaban waxaa kale oo uu Chandra Bahadur Dangi uu noqdey qofka nool ee aduunka ugu gaaban kaasi oo lagu diiwan galiyo Buuga waxyaabaha la yaabka leh ee dunida lagu qoro ee (Guinness World Records) mudo 57 sano ah markii ugu horeysay.
Chandra oo magacan iyo caan-nimada uu helay aan war iyo wacaal toona u aheyn ayaa isaga sugnnaa tuulo ku taal buuralleyda baadiyaha dalka Nepal waxaase calaf u galay magacaasi ka dib markii ay is kadis ah u arkeen kooxo cilmi baarayaal ah oo raadraac ku sameynayey qabiilka Dangi ee ninkaasi uu ka dhashay ee deegaankaasi dega.
Cilmi baarayaasha ayaa la kulmay Chandra Bahadur Dangi waxaana ay u sheegeen in uu isu soo sharaxo ugu gaabanaha aduunka taasi oo uu aqbalay ugu dambeyntii.
Dhakhtar iyo sarkaal ka tirsan Guinness World Records ayaa tagey deegaankii uu ku noolahaa Chandra ee oo ku dhaw degmada Jhapa ee dalka Nepal waxaana ka dib ay u soo kaxeeyeen magaalada Kathmandu ee caasimada Nepal halkaasi oo lagu sameeyey cabir laguna ogaaday in dhirikiisu uu yahay 21.5 inches ama 54.6 centimeters taasi oo ka dhigan cabirka waraaqda jaraa’idka, isla markaana loo caleemo saarey qofka nool ee aduunka ugu gaaban.
Dangi wuxuu kala wareegay rikoorka ugu gaabanaha aduunka Junrey Balawing oo u dhashay wadanka Filipin oo dhirirkiisu ahaa 23.4 inches ama 60 centimeters), kaasi oo sanadkii hore isaguna kala wareegey darajadaassi Khagendra Thapa Magar oo 18 sano jir ah oo dhirirkiisu yahay 26 inches.
Chandra Bahadur Dangi oo ku labisan dhar hido dhaqameed gaar ahaan koofi iyo dhar kale oo gacan ku sameys ah wuxuu muujiyey farxad iyo rayn rayn ka dib markii uu ka soo muuqdey warbaahinta aduunka sida Telefishinada laguna soo daabacay wargeysyada caalamka ugu waa weyn, wuxuu sheegay in uu jecelyahay in uu noqdey qof caan ah, isagoo xusey in uu aduunka booqooshiyin ku tagi doono uuna la kulmi doono dadka caanka ah.
“Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan noqdo ninka aduunka ugu gaaban” ayuu yiri Dangi oo xusey inaanu waligiis wax daawo afkiisa saarin inkastoo uu qabo xanuun ka dhashay qabowga dhulka miyiga ah ee uu ku noolyahay, wuxuu sheegay mar kasta oo uu dareemo xanuun ama qandho in uu cabo biyo kulul isla markaana ay ka jabto xumadii haysey laba ilaa sadex maalmood.
“Si aad ah uma xanuunsado waayo jirkeyda ayaa ah mid wanaagsan” ayuu ku dooday Dangi oo gacanta ku haystey jab muufo xili uu miiska cuntadu u saaran tahay uu ku fadhiyey maadama aanu gaarin hadii uu kursi ku fariisto.
Dangi oo ah ilmaha todobaad qoys ka kooban 8 qof oo isagu jira lix wiil iyo laba gabdhood waxba kama xusuusto Aabihiis & hooyadiis kuwaasi oo dhintey isagoo da’diisu aheyd 16 sano, waxana xanaaneyn jirey walaalkiis ka weyn iyo qoyska intiisa kale.
Dangi waligiis kama tagin tuulada iyo deegaanka uu ku dhashay oo 217 mayl u jira magaalada Kathmandu, wuxuu sheegay in hada ka hor uu isaga tagey qoyskooda oo uu bilaabay in uu gooni u noolaado isagoo taasi uga mudahaaradayey qoyska oo gaabnidiisa inta goobaha la isagu yimaado keenaan lacag ka sameynayey.
Chandra Bahadur Dangi & qoyskiisa waxay dhaqdaan xoolo ahaan Lo’ gisi & Lo’da caadi ah waxaase uu ku qabey kadeed in uu soo celiyo oo kadaba ordo marka ay cararaan, balse wuxuu adeegsan jirey in uu u heeso ama uu ku qayliyo si uu soo celiyo xoolahaasi marka ay ka yaacaan sida uu sheegay Dolak Dangi oo ay ilmo adeer yihiin.
Inkastoo qoyska Dangi ay ku qabeen dhibaato iyo hiif joogto gaabnimada Chandra oo ciyaalku ka daba yaaci jireen markast oo ay banaanka ku arkaan uguna yeeri jireen “Gaabow, ninka gaaban, gaabow….gaabow…gaabow….ninka gaaban” hadana maanta jariidka ayay ka qoslayaan oo farxad ayay dareemayaan maadama wax uun dhaqaale iyo magac ah uu u soo hoyoy 72 sano jir Chandra, iyadoo qoysku isdaba daa in Tv-yada iyo jaraa’ida looga sheekeeyee ay cariiri kaga jiry quut maalmoodka.
Dolak Dangi oo ah ehelada Chandra wuxuu carabka ku dhuftey inaanay waligood hawaysan inay u tartamaan gaabnida Chandra, maadama aanay aqoon laheyn oo aanay garan karin jid iyo jiho loo maro in lagu doodo “Annaa aduunka ugu gaaban”, waase calaf & ninkii cunnee qoyska Chandra waxay naawilaayan haatan inay farqaha ku shubtaan dhaqaale ay ku helaan magaca uu soo jiitey ninkan buuga lagu qoray uu ka dheeryahay, waxaase la iswaydiinaya tallow Chandra rajo iyo hawo aduun ma ka leeyahay in sheediisa ay ka soo agkacdo haweenay uu guursado mise cuqdad ayuu ka qabaa haweenaydii guursan laheyd oo didsanaan iyo dareen ayuu dugsanayaa?.
DAAWO SAWIRADA NINKAN
SULDAN GMP says:
WAAAAAAAAAAAW WAR WA MAXAY NINKAN SAN UGABAN KAN GACANTAYDA SEDAXAD AYABA KADHEERE
Abdishakur M. Ismail says:
sbclive aad bad ugu mahadsantihiin sida qiimaha iyo qaayaha leh ee aad mar la arkaba aad u aqristayashiina oo aan anigu kow ka ahay aad uguso gudbisaan the latest events of the world… chandra Bahandur Dangi Eebe uma wayn dherer uu dadka kale ugalamid dhigo ee anaga ayey tahay in aan ku cibra qaadano Eebana waa Facaalun limaa yuriid.. marlabaad thanks Sbc we proud you…